Wafdi ka socda Puntland oo Kormeer shaqo ku Maraya deegaano ka tirsan Gobolka Ceyn – SBC
Wafdi ka socda Puntland oo Kormeer shaqo ku Maraya deegaano ka tirsan Gobolka Ceyn
Wafdi balaaran oo ka socda maamulka Dowlada Puntland ayaa Gaaray Degmada Widh Widh ee gobolkaasi Ceyn, kuwaas oo halkaasi ku gaaray qaab booqasho ah .
Wafdiga ayaa waxaa ay isugu jiraan Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Puntland iyo Saraakiil ciidan oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Dowlada Puntland .
Wafdigaasi ayaa waxa ka mid ah Xildhibaan Faarax Sulub Jaamac iyo taliye ku xigeenka Ciidamada Police-ka Puntland Gaashaanle Sare C/laahi Saalax Maxamed, waxaana markii ay gaareen deegaankaasi loo sameeyay soo dhaweyn aad iyo aad u sareysa.
Gaashaanle Sare C/laahi Saalax oo la hadlayay Maanta Warqabadka SBC International ee magaalada Buuhoodle ayaa sheegay in deegaankaasi ay u gaareen sidii ay kormeer guud ugu sameyn lahaayeen Xaaladaha Amaanka iyo Nabad geliyada deegaankaasi .
Waxa uu intaasi ku daray Gaashaanluhu in sidoo kale inta ay joogaan deegaanka Widh Widh ay kulamo la qaadan doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada, odayaasha iyo Waxgaradka deegaankaasi .
Wafdigan ka socda Puntland ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu sareeyay gaara deegaanada gobolka Ceyn siiba deegaanada ku xeeran Degmada Widh Widh, waxaana booqashadooda ay tahay mid ay ku marayaan deegaano badan oo aagaasi ku yaala .
Sikastaba ha ahatee deegaanada Widh Widh iyo kuwa hoosyimaada ayaa waxaa la xusi karaa in marar hore ay halkaasi ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan dadka deegaankaasi iyo kuwa Soomaaliland .